Pedro Regis - "Eny" tso-po sy be herim-po - Countdown ho an'ny fanjakana
Ilay Fiadidian'ny Fandriampahalemana ho an'ny	Pedro Regis	ny 27 aogositra 2020:
Ry zanako malala, mila ny «Eny» avy amin'ny fo sy be herim-po Jesosy-ko. Matokia Ilay tia anao sy mahalala anao amin'ny anaranao. Manàna herim-po, finoana ary fanantenana. Handeha amin'ny ho avy ianao amin'ny fitsapana lehibe. Izay manohitra an'i Kristy dia hampijaly ny lehilahy sy ny vehivavy manam-pinoana. Ny fitaovam-piadiana fiarovanao no fahamarinana. Aza adino: ny fahanginan'ny marina manatanjaka ny fahavalon'Andriamanitra. Mitadiava tanjaka amin'ny fiaiken-keloka sy amin'ny Eokaristia. Torio ny Filazantsaran'i Jesosy, satria ianao irery ihany no afaka mandray anjara amin'ny fandresena azo antoka amin'ny foko tsy misy kilema. Mandrosoa tsy misy tahotra. Aorian'ny fahoriana rehetra dia hofafan'ny Tompo ny ranomasonao ary hahazo valisoa lehibe ianao. Ity no hafatra izay omeko anao anio amin'ny anaran'ny Trinite Masina Indrindra. Misaotra anao noho ny namelanao ahy hanangona anao eto indray. Mitsodrano anao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina aho. Amen. Milamina.
← Fanahy Kalifornia - Mahatoky,…
Marco Ferrari - Miverina any… →